प्रदेशको राजधानी नबनेर के भो ? | रुपान्तरण
प्रदेशको राजधानी नबनेर के भो ?
१७ असार २०७६, मंगलवार १५:२४
बन्दैछ आर्थिक राजधानी नेपालगन्ज
प्रदेश ५ को राजधानी बन्नुपर्ने देशको सबैभन्दा पुरानो शहर नेपालगन्ज अब देशको महत्वपूर्ण औद्योगिक गन्तब्य बन्ने तयारीमा लागेको छ । मध्य र पश्चिम नेपालको आर्थिक केन्द्र विन्दु नेपालगन्जलाई छलेर बुटवललाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाईएपछि स्थानीय जनताले स्वाभाविक रुपमा ठगिएको अनुभव गरेका छन ।
नेपालगञ्जलाई प्रदेश नम्बर ५ कोे राजधानी नबनाउने कुरा पहिले नै थाहा हुन सकेको भए बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्ने आन्दोलन चर्काउने स्थानीय बासिन्दाको योजना थियो । प्रदेशको सीमांकनपछि बुटवललाई एक्कासी अस्थायी राजधानी घोषणा गरियो ।
त्यतिबेला निकै ढिला भैसकेको थियो । नेपालगञ्ज वा कोहलपुरलार्ई राजधानी बनाउने आशामा बसेका अधिकांश जनताको आशा निराशामा बदली सकेको थियो । पचासौं बर्षदेखि समग्र पश्चिम नेपालको केन्द्र रहँदै आएको बाँकेसंग अब एउटा मात्र विकल्प छ । त्यो हो नेपालगन्ज नगर र वरपरका क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा बिकास गरेर सक्रिय आर्थिक राजधानी बनाउनु । भारतको राजधानी दिल्ली भएपनि आर्थिक राजधानी मुम्बइ हो । प्रदेश ५ को राजनीतिक राजधानी बुटवल भएपनि नेपालगन्जलाई आर्थिक राजधानीको हैसियत प्राप्त हुनुपर्दछ । जिल्लाका समग्र उद्योगी व्यवसायी र अगुवाहरुले अहिले यो अभियानलाई अगाडी बढाएका छन् । नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तराष्टिय विमानस्थल बनाउने, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रलाई यथाशिघ्र तयार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, सीमानामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने तथा यस क्षेत्रलाई औद्योगिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवाको हब बनाउने मिसन शुरु गरिएको छ ।
यो मिसनको अगुवाई नीजि क्षेत्रको अगुवा संस्था नेपालगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघ र स्थानीय सरकार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले गरिरहेका छन् । यो क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रसंगै औद्योगिक हब बनाउने अभियान शुरु गरिए लगत्तै देशका ठुला औद्योगिक समूहले बाँकेमा लगानी गर्न थालेका छन् । यसले देशभर बाँके लगानीका लागि उपयुक्तक्षेत्र हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
लामो राजनीतिक अस्थिरताका कारण बाँकेले धेरै पुराना उद्योग गुमाएको थियो । नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकिरहेका थिएनन । बन्द अवस्थामा रहेका पुराना उद्योग खुल्न सकेका थिएनन । हाल उर्जा लगायतका बिषम समस्या समाधान भएपछि धमाधम लगानी थपिदै छ ।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैैश्यले बाँके औद्योगिक हबका रुपमा स्थापित भइरहेको बताएका छन् । उर्जा लगायतका समस्या समाधान भएपछि लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको उनको बुझाई छ ।
‘नेपालगन्ज र समग्र बाँके जिल्ला आफैमा लगानीकर्ताका लागि सुनौलो ठाउँ हो । तर अस्थिरता र उर्जा लगायतका समस्याले लगानीकर्ता आकषर््िात भएका थिएनन् । अहिले अवस्था सुध्रिएको छ’,बैश्यले बताए,‘अब कुनै लगानीकर्ताले बाँकेलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन् ।’
आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा बाँकेमा उद्योग सन्चालनका लागि ठुला औद्योगिक समुहहरु जय अम्बे स्टील, सगरमाथा स्टील ईण्डष्ट्रिज, नेपाल वोलहोप एग्रीटेक प्रालि, गोल्डेन गेमिङ्ग इन्टरनेशन क्यासिनो, वर्षा रिसाईक्लिङ्ग ईण्डष्ट्रिज, विकास फ्लोर मिल र भिभो मोवाईल नेपाल प्रालिको सर्भिस सेन्टरले अनुमति पाएका थिए ।
अनुमति पाएका मध्ये अधिकांस उद्योग सन्चालनमा छन् । केही उद्योगको पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केही महिनामा पूर्वाधार निर्माणको काम सक्ने बित्तिकै बाँकी उद्योग पनि सन्चालनमा आउने छन् ।
उद्योग बिभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा बाँकेमा ठुला उद्योगको स्थापनासंगै लगानीमा पनि बिस्तार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३ र २०७४ मा बाँकेमा सात वटा उद्योग स्थापना भएका थिए । ती उद्योगमा ५६ करोड हाराहारीमा लगानी भित्रिएको थियो । सातवटा उद्योगबाट जम्मा १ सय ४२ जनाका लागि रोजगारी सिर्जना भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४ र २०७५ मा बाँकेमा उत्साहजनक लगानी भित्रिएको उद्योग बिभागको तथ्यांकबाट पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष बिभागमा दर्ता भएका विभिन्न ठुला उद्योगले जिल्लामा ७ सय ८२ जनालाई प्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको वातावारण सिर्जना गर्दैछन् ।
लगानीकर्ता आकर्षणको कारण
संघीयता पछि बनेको कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशको बजारको हिस्सा ओगट््न कुनै पनि उद्योगले नेपालगञ्जमा औद्योगिक प्लान्ट नराखी सुखै छैन । यी दुई प्रदेशमा दैनिक जसो हरेक उत्पादनको बजारक्षेत्र बढ्दै गएको छ । विकास निर्माण तिव्ररुपमा भइरहँदा निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको शहरीकरणले उपभोग्य सामाग्रीको बजार थपिदैछ ।
यस्तो अवस्थामा पूर्वमा उत्पादन भएका सामाग्री पश्चिममा ल्याएर बिक्री गर्दा ढुवानीमा धेरै रकम खर्चिनु भन्दा यही उद्योग खोलेर उत्पादन गर्नु उद्योगीका लागि दीर्घकालीन रुपमा फाईदाजनक हुन्छ । आफ्ना उत्पादनलाई ठुलो स्केलमा बिक्रीगर्ने, पश्चिममा राम्रो बजारको सम्भावना देखेका व्यवसायीहरुले यिनै कारणले उद्योग सन्चालनगर्न नेपालगन्ज रोजेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।
श्रेष्ठका अनुसार बाँकेमा लगानीकर्ताहरु आकर्षितहुने अर्को कारणसहज रुपमा जग्गा प्राप्त हुनु हो । अन्य ठाउँ भन्दा सस्तो र भनेजति जग्गा उपलब्ध हुने भएका कारण पनि यहाँ लगानीकर्ताको आर्कषण बढी देखिएको उनले बताए । उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेपछि यहाँ पनि जग्गाको मुल्य बढ्न थालेको उद्योगी व्यवसायीको भनाई छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासंग जोडिएको जानकी गाउँपालिकामा मात्रै दर्जनौ ठुला उद्योग सन्चालन हुनुको कारण यही हो । भारतसंग सीमा जोडिएको, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी बन्दै गरेको तथा नेपाल–भारत जोड्ने रेल समेत आउँदै गरेकोले आयात निर्यातमा फाईदा पुग्ने दूरदृष्टि राखेर यहाँ उद्योग थपिने क्रम जारी छ ।
देशमा नयाँ गणतान्त्रिक सम्विधान लागू भएपछि राजनीतिक स्थीरताको वातावरण बनेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हरेक हिसावले बाँके जिल्लामा लगानीमैत्री वातावरण छ । यसलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ता प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
बाँके जिल्ला लगानी बिस्तारका लागि उपयुक्त ठाउँ भएकाले पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा स्थानीय उद्योगी अच्यूत प्रसाद प्रसाईको भनाई छ । सरकारले बाँकेको नौवस्तामा पाँच नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम शुरु गरिसकेकोले उक्त कामलाई छिटो पुरा गर्नुपर्ने माग अधिकांश उद्योगी व्यवसायीको छ ।